ခင်မင်းဇော်: ပြောချင်တာလေး ရေးပြမယ်
မှတ်သားစရာတွေချည်းပါလား။ ဒီလိုပို့စ်မျိုး ဖတ်ရတာ အကျိုးရှိပါပေ့။
လူ့ဘဝဆိုတာ တိုတိုလေးပါ. ကိုယ့်အတွက်ကြည့်နေကြလို့ လောကကြီးက ပျက်စီးစပြုနေတာပေါ့.
မကြီးရေ ဖတ်သွားတယ်ဗျာ ဘာမှတော့ ပြန်မပြောချင်တော့ပါဘူး ဘာပိတ်ပြီး ဘာကို ငြင်းနေလဲတော့ မပြောတတ်တော့ဘူးရယ် တကယ့်စစ်မှန်တဲ့ သူရဲကောင်းများကို လေးစားပါတယ် အားကျပါတယ် လုပ်နိုင်သည် မလုပ်နိုင်သည်ထက် လုပ်သွားသူများကို လေးစားမိတာတော့ အမှန်ပါပဲ
I love this post too..
ရောမ မြို့ ကြီး မီးလောင်နေတဲ့ အချိန်မှာ တယောထိုးနေနိုင်တဲ့ နိရိုးဘုရင်ကြီးထက်ပိုဆိုးတဲ့သူတွေ ဗမာပြည်မှာ လည်းရှိနေပါတယ် မီးလောင်နေပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို တယောထိုးမပျက်တဲ့ နိရိုးဘုရင်ကြီးကို နားလည်ပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့်
ဗမာပြည်ကြီး မီးလောင်နေတဲ့အချိန်မှာ (ကိုယ့်ဟာကို မနေဘဲ မကူညီချင်နေပေါ့) ဓါတ်ဆီထပ်လောင်းပေးနေတဲ့ အချောင်သမားလူတန်းစားတွေ မီးငြိမ်းတဲ့ သူတွေကို ဒုခ ထပ်ပေးနေတဲ့ သတင်းပေး အင်ဖော်မာ အလိုတော်ရိ တွေကိုတော့ ဘယ်လို မှ နားမလည်နိုင်ခဲ့ဘူး
လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေကို လက်ခံပေမဲ့ ကောင်းတာနဲ့ မကောင်းတာကို ခွဲခြားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်း ရှိသူတွေက ကောင်းရာကောင်းကြောင်းလုပ်နေသူတွေကို
စိတ်အနှောက်အယှက်ပေး၊ ကိုယ်အနှောက်အယှက်ပေးတာကိုတော့ နားလည်လက်ခံပေးလို့ မရပါ။ ကိုယ်ကပဲ သဘောထားမကြီးလို့များလား တွေးမိ။
ကိုယ်နဲ့ မတူလို့ ရန်သူသဘောထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။
လက်နက်၊အာဏာရှိ အပြစ်ကြီးကြီးသမားတွေကို နှာကောင်းကောင်းစီးပြီးတော့မှ၊
လက်နက်မဲ့ သမားတွေရဲ့ ဘာမဟုတ်တဲ့
အသေးအဖွဲ အပြစ်အနာကို ပုံကြီးချဲ့တဲ့သူတွေကိုလဲ
ကိုယ့်ဘာသာတွေးမိတာက အယူအဆတခုအတွက်၊ ယုံကြည်ချက်တခု အတွက် ခေါင်းမာနေသူနဲ့ မျက်နှာပြောင်တိုက် စကားနိုင်လုရဲသူ စကားလုံးအရ နိုင်ရင်ပြီးရော ပြောသူ၊ တန်ဖိုးချင်းမတူပါလားလို့ပါပဲ။
ကဒေါင်းများလို လှတယ်ဆိုလို့ ကရင်း ကရင်း ကိုယ့်ရဲ့ နောက်ပိုင်းသဘာဝကို လူကြားထဲ ရှင်းရှင်းကြီး
ဖွင့်ပြမိသူကို စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ မေ့ထားလိုက်တော့မယ်။ ပြန်ချေပတာလဲ မဖတ်ချင်တော့ပါဘူး။ စကားလဲ ပြိုင်ပြောချင်စိတ်မရှိပါ။
မဆီမဆိုင် နောက်ဆက်တွဲအောက်က စာပိုဒ်လေးကို့ကြိုက်တယ်။
ု နှစ်သစ်ကူးမှာ ဖတ်လိုက်ရတဲ့ သိပ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်လေးပါ လူတွေက ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေးတာ ဘာဖြစ်လဲလို့ ဆိုလာနိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေး လက်ရေးတော့လှပစေ..သူများတော့ ဖတ်လို့ရပါစေ ဆိုသလို .
ကိုယ် ထင်ရာ ကိုယ်မြင်ရာ ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ချရေးနေပေမယ့် လူမူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက "ဟင်" လို့ "“ဟင်" သွားမယ့် အဖြစ်မျိုးတွေကို နှစ်သစ်မှာ ထပ်မ"“ဟင်" ပါရစေနဲ့လို့..
မသဒ္ဓါရဲ့ လူကြမ်းမင်းသားကဗျာလေး မခင်မင်းဇော် ဘလော့ဂ်မှာ ပြန်တင်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်ဗျ။
ရင်ဘတ်တူသူပါ..အမရေ......Happy New Year နော် အမ... :D